कोरोना ब्याच भनेर हामीलाई किन जिस्क्याइन्छ? :: Setopati
कोरोना ब्याच भनेर हामीलाई किन जिस्क्याइन्छ?
नुगेन लक्सम्बा असोज २६
सम्पादकीय नोट: हामीले केटाकेटीहरूका लेख शृंखला सुरू गरेका छौं। आफ्ना नानीबाबुले नेपाली भाषामा लेखेका अनुभव, कथा, कविता, निबन्ध लगायत सिर्जनात्मक रचना तल दिइएको इमेल ठेगानामा पठाउनुहोस्, हामी प्रकाशित गर्नेछौं। लेख पठाउँदा फोटोसहित स्कुलको नाम र कक्षा पनि खुलाउनुहोला।इमेल: ketaketi.setopati@gmail.com
एसइई परीक्षा २०७६ को फर्म भर्ने ४,८२,२१९ विद्यार्थीमध्ये म पनि एक हो। चैत ५ गते अचानक हाम्रो परीक्षा सर्ने भनी समाचार आयो। मनमा परीक्षाको डर थियो। त्यसैले अझै उक्त समाचार पत्याउन सकेको थिइनँ।
भोलिपल्ट बिहान ७ बजेतिर बाटोमा हेर्दा केही विद्यार्थीहरू प्रवेश-पत्र लिई परीक्षा दिन गइरहेका थिए। हिजोको समाचार झुटो त होइन जस्तो भयो, तर होइन रहेछ।
विश्वलाई असर पुर्याइरहेको कोभिड-१९ ले मेरो परीक्षालाई असर गर्छ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ। त्यसपछिका दिनहरुमा मैले आफ्नो तयारी भने गरिरहेकै थिएँ परीक्षा हुन्छ भनेर।
जेठ २८ गते बुधबार एसइई परीक्षा रद्द भएको खबर आयो। एक हिसाबले परीक्षा सकिएझैं खुसी लागे पनि त्यत्रो मेहनत खेर गएकोमा रिस पनि उठेको थियो।
त्यसपछिका दिन एक हिसाबले ढुक्कसँग बिते पनि अर्को तर्फबाट हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको यातना एसइई विद्यार्थीलाई सामाजिक संजालमा हाँसोको पात्र बनाएर दिइँदै थियो।
भदौ १ गते हामीले लेख्दै नलेखेको परीक्षाको रिजल्ट आयो।
कोही विद्यार्थीको सोचेभन्दा राम्रो रिजल्ट आयो त कोहीको सोचेको भन्दा नराम्रो आयो। तर मलाई लाग्छ धेरैको सोचेको जस्तै आयो होला।
सबै समेटेर हेर्दा २०७५ सालको एसइईको तुलनामा २०७६ सालको एसइईको नतिजा राम्रो आएको छ। यसले गर्दा नतिजा प्रकाशित हुने बित्तिकैदेखि सामाजिक संजालमा २०७६ सालको विद्यार्थीमाथि विभिन्न ट्रोलहरू बन्न सुरु भयो।
कतिपय ट्रोलहरू विद्यार्थीको मनोबल गिराउने खालको पनि थियो। कतिपय शिक्षित भनाउँदाहरूले नै हामीलाई हाँसोको पात्र बनाए।
के एसइईको परीक्षा हामी विद्यार्थीले सार्न अनुरोध गरेर सरेको अनि रद्द भएको हो र?
अथवा हामी विद्यार्थीले आन्तरिक मूल्यांकन (जुन सरकारको निर्णय अनुसार भयो) गर्न अनुरोध गरेका थियौं र?
एसइई परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्मको हाम्रो मिहेनत र हामीले मानसिक प्रेसरसहित गुज्रिएर गरेको पढाइलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तर तोकिएको समयमा परीक्षा भएन यसमा हाम्रो के दोष छ?
हामी विद्यार्थीहरूले यस्ता ट्रोललाई वेवास्ता गर्न बाहेक हाम्रो हातमा केही उपाय थिएन। धेरैले आफ्नो बिगत भुलेर २०७६ सालको एसइई परीक्षार्थी कक्षा १ देखि १० सम्म कुनै परीक्षा नदिइकन सिधै एसइईको परीक्षार्थी भए झैं व्यवहार गरे।
धेरैको लागि हामी एसइईको विद्यार्थी हाँसोको पात्र भयौं।
अझै पनि हामीलाई कोरोना ब्याच, बिना परीक्षा पास भएको रुपमा मानिसहरूले होच्याइराखेको पाउँछौं।
(नुगेन लक्सम्बाले इलामबाट एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी छिन्)
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २६, २०७७, ०५:३१:००